यी हुन आमालाई चार तलाबाट खसालेर मार्ने राक्षक छोरा ? भिडियो हेर्नुहोस - News Bihani
बुधबार, मंसिर २५, २०७६ Wednesday 11th December 2019
यी हुन आमालाई चार तलाबाट खसालेर मार्ने राक्षक छोरा ? भिडियो हेर्नुहोस
प्रकाशित मिति : सोमवार, असार २, २०७६
नयाँ दिल्ली । भारतको राजकोटस्थित एक अपार्टमेन्टको चौथो तल्लाबाट छोराले आमालाई धकेलेर हत्या गरेको एक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। राजकोटस्थित दर्शना अपार्टमेन्टको चौथो तल्लाबाट छोराले ६५ वर्षीया आमालाई धकेलेको भिडियो टेलिभिजनहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।
सिसिटिभी फुटेजमा सन्दिप नाम गरेका ती युवकले आमालाई आफु बस्दै आएको अपार्टमेन्टबाट बाहिर निकालेर लिफ्टसम्म लगेको प्रष्टरुपमा देखिन्छ। सन्दिपले छतमा जाँदा आमालाई सँगै लिएर जान्छन् र केहिबेर पछि एक्लै फर्किन्छन्।
उ कोठामा पुगेको केहीबेरमा एक युवक उनको अपार्टमेन्टमा आएर आमाले छतबाट खसेर आत्माहत्या गरेको कुरा सुनाउँछन्। उनले नाटक गरेर आमा खसेको ठाउँमा जान्छन्।
सुरुमा राजकोट प्रहरीले पनि आत्महत्या गरेको पुष्टि गर्‍यो। तर, पछि राजकोट प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा ती ६४ वर्षीया महिलाको हत्या भएको बताए। प्रहरीले भने, ‘महिलालाई हिँडडुल गर्न अरूको सहारा चाहिने रहेछ।’ महिलाको हत्या भएको दिनको फुटेज हेर्दा उनले आत्महत्या नभई छोराले छतबाट खसालेको प्रहरीले जानकारी दिए।
आमालाई खसाल्ने ती व्यक्ति अनपढ होइनन्, उनी प्रोफेसर हुन्।
आमाको हत्याको आरोपमा प्रहरीले ती ‘राक्षसी’ छोरालाई पक्राउ गरेको छ। यस घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको राजकोट प्रहरीले जनाएको छ।
निर्मला हत्या प्रकरण : अनुसन्धानको सुई दिलीपतिरै
लुम्बिनीमा बुद्ध बिहार भित्र यसरी चल्छ अबैध धन्दा ( हेर्नुहोस् भिडियो )
आलमको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको परेड
भारत सकारात्मक नभएपछि , विशेष दूतुको सट्टा सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई नै प्राथमिकता
दशकौंदेखि ट्याक्सी सिन्डिकेट, सस्तोमा चलाउँछु भन्नेले समेत पाउँदैनन्
तीन जिल्लामा जनता आवासका २५२ घर निर्माण
खरिदमा मनमौजी, शासन छ, छैन सुशासन
ऐतिहासिक दरबारका विरूप कथा